Maalin: Janaayo 4, 2018
Dekedda Atabey Ferry waxaa loo sameeyey qol sugitaan
Dowlada hoose ee Magaalo xeebeedka Malatya ee muwaadiniinta Battalgazi-Baskil doonta ay sugayaan markabka inta ay sugayaan dekedaha markabka waxaa laga sameeyay atabey. Marka loo eego macluumaadka lagu siiyay mawduuca degmada Battalgazi Atabey Ferries [More ...]
Warshad Kaos Logistics oo ku taala dalka Iran!
Dhacdooyinka maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay dalka Iiraan ayaa sii kordhinaya rabshadaha. In kasta oo xogta ku saabsan mudaaharaadyada ay weli ka sii socdaan warbaahinta Turkiga, waxaa sii kordhaya tirada dadka naftooda ku waayey. Mas'uuliyiinta Iiraan waxay qaadi karaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah dhacdooyinka, si loo xakameeyo kacdoonka. [More ...]
Madaxweyne Karaosmanoglu, '' Waxaa jira xeerar ixtiraam iyo qadarin ku saabsan gaadiidka ''
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo Weyn İbrahim Karaosmanoğlu ayaa ka qeyb qaatay tababarka oo ay soo qaban qaabisay Transportationpark A.Ş. Duqa Magaalada Izmit [More ...]
Tekirdağ Port waa in Tekirdağ?
Ururka Badaha Turkey noqon doonaa berri qabtay, gorgortan kama dambaysta ah ee gundhigga gaar xaaqiijiyay Tekirdağ Port. Turkey Maritime Organization sida Tekirdag gorgortan kama dambaysta ah ee berri curdan gaar dekedda ee (Friday, January 5 [More ...]
Madaarka Garoonka diyaaradaha ee Ankara Esenboga
Madaarka Esenboga ee Ankara waxaa laga dhigi doonaa Metro: Duqa Magaalada Ankara Mustafa Tuna, maddaarka waxaa la sameyn doonaa dhulka hoostiisa, metrooga waxaa lagu mari doonaa Jaamacadda Yıldırım Beyazıt. Duqa Magaalada Ankara Mustafa Tuna ayaa ku sugan Habertürk [More ...]
Under tareenka qofka IZBAN u dhintay si xun
Qof aan la aqoonsan oo ku nool degmada Konak ee Izmir, ayaa ku dhintey tareenka İZBAN si xun. Shilka ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta tareenka dhulka hoostiisa ee Hilal inta lagu jiray safka fiidkii ee 23.00. Allese, daroogo buu adeegsaday [More ...]
Shaqadu waxay sii socotaa dhinaca Larende hoosteeda Karaman
Duqa Magaalada Karaman Ertugrul Caliskan, oo dhisme ka socda Larende ayaa baaritaan ku wada masuuliyiinta la helay macluumaadka. Waxay ka shaqeysaa Larende Underpass, oo loo qaabeeyey loona dhisay iyada oo lala kaashanayo dowladda hoose ee Karaman iyo agaasinka guud ee TCDD [More ...]
Madaxweynaha goobta Warshadaha ee Gül Küçük Mehmet Boyacı, TCDD Afyon 7. Agaasimaha gobolka Adem Sivri ayaa siiyay war wanaagsan oo ah in imaatin aad u casri ah oo imaatinka iyo wadada ka baxa Isparta iyo Egirdir [More ...]
Kuleylinta, kuleylinta iyo shaqada nadiifinta kuleylka ayaa la qaban doonaa Adeegga Nadiifinta ayaa la qaadi doonaa Mashiinka Tareenka Butt Welding iyo Aluminothermite alxamarka waxaa la sameyn doonaa Saliida iyo walxaha kale ee waxyeelada leh ee deegaanka bada. [More ...]
Diyaaradaha tijaabada ah ee ugu horeeya ee 3.havaliman ayaa la rajeynayaa inay bilawdaan Febraayo.Halkalı Khadadka cusub ee metrooga ayaa shaqeyn doona sanadkaan. In ka badan Turkey [More ...]
Markii la codsado Isuduwaha Maamulka Gobolka ee Wadooyinka Gobolka (DDY), Dhismaha xad-dhaafyada ayaa lagu dabaqi doonaa isgoysyada heerka 281.Cadde iyada oo loo marayo Isdhaafsiga Wadooyinka Eğirdir iyo Gül Küçük Sanayi Sitesi [More ...]
Aasaasay by Izmir degmada Metropolitan, nidaamka gaadiidka Turkey ugu dhamaystiran caaqil, marks buuxa ka heshay Waaxda Booliska Izmir ee. Taliyaha booliiska Hüseyin Aşkın iyo saraakiisha ugu sareysa booliska magaalada [More ...]
Mashaariicdii metro-ka ee Kaynarca-Pendik-Tuzla iyo Ümraniye-Ataşehir-Göztepe waa la kansalay. Waxaa la sheegay in la kansalay afar wado oo metro oo dheeri ah, waxaana la sheegay in shirkadahaan lasiin doono ku dhawaad ​​1 bilyan 300 milyan. Hoos Ka daawo Xog-hayaha Guud ee Kadir [More ...]